दूध फ्रान्सेली टोस्ट - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मिठाई100 मिनेट20 व्यक्ति
दुध टोरिजास, केवल उनीहरूको कुरा गर्दा मेरो मुखमा पानी पर्छ। घरमा मेरी आमा सधैं उनीहरूको लागि बनाउनुहुन्छ ईस्टर हप्ता
त्यहाँ धेरै तरिका छन् दूध वा दाखमद्य, मह, चिनी र दालचीनी संग। आकार र स्वाद प्रत्येक शहर र घर मा फरक हुन्छ। यस पटक मैले तिनीहरूलाई दूधले बनाएको छु, यदि साना बच्चाहरूले उनीहरूलाई जाँच्न चाहान्छन्।
तपाईं पहिले नै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ... क्षेत्र मा साथीहरू भेटेर र, एक सानो फरक र को फाइदा लिन को लागी विशिष्ट रेसिपीहरू, मैले केहि दूध टोर्रिजा बनाउने निर्णय गरें, घरमा साना बच्चाहरु को लागी विशेष।
बच्चाहरूले उनीहरूलाई कोशिस गर्न सोचेनन्, तर हामीले गरे हामीले उनीहरूको राम्रो खाता दिएका छौं। यति धेरै कि फोटोमा देखा पर्ने तीनजना मात्र बाँकी रहेका थिए ... म उनीहरूको फोटो पनि लिन सक्दिन।
मैले एउटा छिमेकको सुपरमार्केट फेला पारे जुन बिक्री भयो Torrijas को लागी विशेष रोटी त्यो भित्र आउँछ सानो वर्ग। मलाई यो मनपर्दछ कि यदि उनीहरूले मलाई बढी काम दिए पनि किनभने मलाई थाहा छ यो बच्चाहरूको लागि आदर्श आकार हो।
1 दूध फ्रान्सेली टोस्ट
एक Torrijas जसको साथ घरको सब भन्दा सानोले आफ्नो औंलाहरू चुस्नेछ।
खाना पकाउने समय: 10M
Torrijas को लागी पान (नुस्खा हेर्नुहोस्)
G०० ग्राम चिनी
२ दालचिनी स्टिकहरू
मैले अण्डा कुटे
चिनी, सुन्तलाको बोक्रा र दालचिनीको साथ दुध तताउनुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २। यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्।
रोटीका टुक्रालाई दुधमा भिजाउनुहोस्। हामी तिनीहरूलाई पिटिएको अण्डा पार गरेर तातो पार्दछौं र तिनीहरूलाई तातो तेलमा फ्राई गर्नुहुन्छ। हामी तिनीहरूलाई हटाउँछौं जब तिनीहरू सुनहरी खैरो रंगका छन्।
हामी भान्साको कागजको साथ प्लेटमा ड्रेन गर्दछौं।
हामी मह (स्वाद अनुसार मात्रा) र पानी (स्वाद अनुसार मात्रा) एक सॉस प्यानमा तताउँछौं। हामी यसलाई रिस उठ्छौं।
हामीले महको लागि टोर्रिजा पास गर्‍यौं। र खान को लागी तयार छ।
थप जानकारी - विशिष्ट ईस्टर व्यंजनहरु खण्ड / फ्रेन्च टोस्ट रोटी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » दूध फ्रान्सेली टोस्ट
जब म टोरिजाज बनाउँछु, म दालचिनी र निम्बूको साथ दुध प्रयोग गर्दछु जुन उनीहरूले पहिले नै बनाइसकेका स्टोरमा बेच्छन्, त्यसैले म तिनीहरूलाई छिटो बनाउँछु र जब मसँग ब्रुचेस हुन्छ जुन अलि कडा वा सुक्खा भएको छ, म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छु र ती बाहिर आउँछन्। राम्रो, यस्तो लाग्दछ कि उनीहरूसँग क्रीम छ, म आशा गर्दछु कि यदि कसैले यो कोशिस गरेमा, उनीहरूलाई यो मनपर्दछ।
नमस्कार, टोर्रिजहरू एकदम स्वादिष्ट थिए !!!!!! यो कस्तो देखिन्छ !!!!!
म एक नयाँ कुक ब्लगर हुँ, जसले यस हप्ता फ्रान्सेली टोस्ट पनि बनाए। यदि तपाईं मेरो ब्ल्ग हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई हेर्न:
र जे भए पनि तपाई अनुयायी बन्न सक्नुहुन्छ, म धेरै उत्साहित हुनेछु। शुभकामना
थर्मोमिक्स मेलिल्लाको साथ खाना पकाउँदै भन्यो
तिनीहरू धेरै धनी हुनुपर्छ। मैले तिनीहरूलाई अर्को दिन Varoma मा गरें। क्रिस्टिना जस्तै, म पनि एक नयाँ "कुक" हुँ र सबै सल्लाह र मद्दत राम्रो आउँछ।
थर्मोमिक्स मेलिलासँग पकाउँदा प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यो नुस्खा हो जुन सँधै मेरो घरमा बनाइन्छ, जुन मैले गरेको छु, यसलाई थर्मोमा अनुकूल छ। मेरी आमाले तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा वाइनले बनाउनुहुन्छ, तर जब हामी थोरै थियौं उनले दूधले उनीहरूलाई बनाउँछिन्, र अब बारी आयो मेरो सानो बच्चा।
मोनिका जेपी भन्यो
नमस्ते!! मैले वरोमाका ती प्रयासहरू पनि गरेको छु र मैले भन्नु पर्छ, यद्यपि सुरुमा, जब उनीहरूले मलाई भने, मैले सोचे: "कस्तो छ", एक पटक परीक्षणहरू धेरै राम्रो छन् ... र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि, तिनीहरूले भुटेको छैन, मलाई लाग्छ त्यो लाइनको लागि राम्रो हुनेछ 😉
मोनिका जेपीलाई जवाफ दिनुहोस्
मोनिका जेपी, हामीले प्रकाशित गरेको टोर्रिजस अल वरोमा पनि, यी थर्मोमा अनुकूलित हुन्छन्, किनकि हामीले घरमै टोरीजास बनाएका छौं, र मैले त्राइ गरेको छु, किनकि यो गर्ने एउटा अर्को तरिका हो, र यसैले विभिन्न प्रकारका छन्।
म अहिले उनीहरुलाई गर्दैछु !!!! धनी बन्नुहोस् र कति राम्रा गन्ध उनीहरू! खैर, यति धेरै दालचिनी एक कामोद्दीपक हो, सावधान रहनुहोस् यो इस्टर !!!! लाई अभिवादन र तपाईंको ब्लगको लागि धन्यवाद।
तिनीहरू मरेको हुनुपर्छ। तपाईका बूब्सका लागि धन्यबाद।
र हामी आशा गर्दछौं कि हामीसँग बिहान सब भन्दा खुशी छ।
शुभ प्रभात ... र कुन फ्रन्ट यी फ्रान्सेली टोस्टमा। म तिनीहरूलाई आज खाजाको लागि बनाउन चाहान्छु, तर टोरीजासको लागि रोटी कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ, एक विशिष्ट सुपरमार्केटमा, बेकरी आदिमा? धन्यबाद र म तपाइँलाई कसरी थाहा भयो भनेर बताउनेछु ...
नमस्कार सद्गुण !!!
हामी त्यसलाई चुलो भट्टीमा बनाउन सक्छौं तपाईंको टोरिजाज रेसिपी जस्तै, वा किनभने यो दूधबाट बनेको छ, यो राम्रो हुँदैन। तिनीहरू यति हलुका छन् कि यदि तिनीहरूले बेक गरिएको छैन भने, म तिनीहरूलाई बनाउँदिन।
मैले यो बनाउनको लागि सुरू गरिसकेको छु .. र दूध बाहिर पकाएको छ, खाना पकाउँदै ... कस्तो कपडा, भान्छाले मलाई छोडिदियो .. घातक .. मैले दुध राखेको छु, र यो पकाइएको छ .. तर यसलाई हेर्दै ... । सावधान रहनुहोस्, कि यदि यो खाना पकाउँदछ, यो उठ्छ र बाहिर आउँछ ...। अन्यथा अहिल्यै म दुधबाट रोटी पार गर्दैछु ... आशा छ उनीहरूले मलाई राम्ररी फिट गरे ... धन्यवाद ...
योलपीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मैले ती अहिलेसम्म गरेको छैन, मलाई आशा छ कि तिनीहरू राम्रा र स्वादिष्ट छन् किनकि उनीहरूको हेराईको कारण